20 Qodobbada Salaadda oo looga soo horjeedo Cadaadiska Ibliiska | QODOBADA LAGU SAMEEYO
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 20 Qodobbada Salaadda oo looga soo horjeedo Cadaadiska Ibliiska
20 Qodobbada Salaadda oo looga soo horjeedo Cadaadiska Ibliiska
1 Yooxanaa 3: 8:
8 Kii dembaabaa wuxuu ka Ibliiska Ibliiska; waayo, Ibliisku tan iyo bilowgii ayuu dembaajiyaa. Taas aawadeed ayuu Wiilka Ilaah u muuqday inuu baabbi'iyo shuqullada Ibliiska.
Cadaadiska jinniyada waa mid dhab ah, dad badan oo adduunka ah ayaa maanta ku hoos jira dulmiga ibliiska,. Falimaha Rasuullada 10:27 waxay noo sheegaysaa sida Ciise loo subkay inuu xoreeyo kuwa Shayddaan ku cadaadin jiray, shaydaanka ayaa siyaabo badan dulmi ugu geysan kara dadka, saboolnimada, ilaa cuduro, Niyad Jab, dib u dhac guurka, madhalaysnimo, ganacsi iyo dib u dhac shaqo tacliimeed guuldarrooyinka iwm liistadu waa dhammaad. Maanta waxaan u soconayaa 20 qodob oo duco ah oo ka dhan ah dulmiga shaydaanka. Tan qodobbada salaadda Wuxuu kaa xoreyn doonaa shabag kasta oo shaydaanka kugu galiyay. Sida aad sheydaanka u adkeyso salaada, waxaan arkaa in dulmigaagu ku dhamaanayo magaca ciise.
Haddii aad mar labaad dhalanayso dhalashada Ilaahay, waxaad ka sareysaa shaydaanka, sidaa darteed waxaad ka sareysaa dulmiga. Matayos 17:20, Luukos 10:19, Ciise wuxuu noo sheegay inuu ina siiyay awood shaydaanka, waxaan ku amri karnaa sheydaanka iyo jinniyadaada doonis, Ciise wuxuu ina fahansiiyay inaan awood ku leenahay jinniyada oo dhan. Sidaas darteed diidan in Ibliisku cadow galo. Ha u ogolaan naftaada inaad noqoto dhibane ama ugaarsato shaydaanka, u ducee noloshaada, jidhkaaga, ganacsigaaga iyo qoyskaaga. Ka faa'idee qodobbada salaaddaan ee ka soo horjeedda dulmiga shaydaanka oo Ibliiska cagihiisa hoostooda geli. Sida aad tukashadaan salaadda ugu tukatid maanta, waxaan kuu arkaa inaad dib u heshay guushii aad ka gaadhay shaydaanka magaca Ciise.
1. Rabbiyow, waan diiday nooc kasta oo dulmi jinni oo ku yimid magaca Ciise.
2. Barbaar kasta oo xagga ruuxa ah oo ku dhaca dhaqaale ee la xidhiidha noloshayda, hel aar dabka ah, magaca Ciise.
3. Lacag kastoo qalaad oo aan haysto waa in lagu daadiyaa dhiigga Ciise.
4. Rabbiyow, gacmahayga ka nadiifi nooc kasta oo fashilaad iyo burbur dhaqaale ah, magaca Ciise.
5. Magacayga, meheraddayda iyo shaqooyinkaygu waxba kama duubi doonaan ruuxa dhaqaale burburka, magaca Ciise.
6. Rabbiyow, ka kharaji dhaqaalahayga ceel kasta oo shaydaan, magaca Ciise.
7. Sayidow, awoodaha i dulman ee dhammaan dulman dhaqaalahayga ha ku fadhiistaan ​​kursiga ay ii dhiseen, magaca Ciise.
8. Geed kasta oo ka mid ah. culays, dib-u-dhac iyo niyad-jab, ka hawlgala meel kasta oo noloshayda ka mid ah, waxaa lagu gooyaa faaska dabka, magaca Ciise.
9. Sayidow, i siiya furaha wanaaggaada oo dhan oo aad bankigaaga ku keydisay, magaca Ciise.
10. Meel kasta oo khasaare ah, oo magaca Ciise lagu burburiyo.
11. deyn kasta oo deyn ah, oo ku kacda dhaqaalahayga, waa lagu burburin doonaa magaca Ciise.
12. Waardiye shaydaan kasta oo waardiye ah, oo hagaya macaashka meheraddayda, ganacsigayga iyo gacmahayga, wuxuu ku qaataa roobdhagaxyaale dab ah, magaca Ciise.
13. Wax alla wixii ay cadawgu odhan lahaayeen gacmahaygu waxba kama suurtoobi karaan, gacmahow, maqla erayga Rabbiga, bilaw inaad si aan macquul aheyn u fuliso magaca Ciise.
14. Subkid si ay barwaaqada u gaadhaan, gacmahayga ku dheji magaca Ciise.
15. Gacmahayga waan ka sii daayaa addoonsiga shaydaan kasta oo ku lug leh dhaqaalahayga, magaca Ciise.
16. Waxaad tahay ruux jahwareer ah iyo shaydaan shaydaan ku deymo deyn badan, isku wareeji nolosheyda iyo ganacsigayga, magaca Ciise.
17. Baraarug kasta oo dhicitaan dhaqaale ku dhaca oo saameeya dhaqaalahayga, waxaa lagu rujin karaa faanka dabka, magaca Ciise.
18. Adoo fallaadada dabka leh, waxaan u dacwoodaa hay'adaha oo dhan burbur hantiyeed, oo loo habeeyey dhaqaalahayga, magaca Ciise.
19. Jinni kasta, nin xoog leh iyo ruuxi la xidhiidha dhaqaale burburka, wuxuu helaa roobdhagaxyaalaha dabka, oo waa la dubay isagoo aan dawayn karin, magaca Ciise.
20. Rabbiyow, igu liibaani wixii aan ka fikirayay, magaca Ciise.
Waad ku mahadsantahay aabe sidaad ugu jawaabtay ducadayda kujirta magaca Ciise
article Previous40 Salaad Guusha Nolosha
Next articleSida loo Joojiyo Qodobbada Salaadda ee dib looga laabto
Joanne Marso 30, 2021 X XXX: 12 am
Waan tukaday oo waxaan dareemay inuu ilaahay i taabtay, oo aan xoroobay, ka dib IT-gu wuu soo noqdaa waan canaantaa, tukadaa, akhriyaa erayga, dareenka ayaa i hoosta.
Lisa scavella Sebtember 6, 2021 saacadu markay tahay 6:30 pm
Waxaan si dhab ah u raadinayaa ka samatabbixinta addoonsiga maaliyadeed ee la'aanta iyo saboolnimada magaca Ciise oo waxaan ku raacsanahay salaadda iyo awoodaha iyo gudaha la siiyay waxaan u raacaa xorriyadda halka ruuxa Eebbe ka jiro waa Xorriyad waxaanan aaminsanahay Rabbi wuu i barakeeyey oo shaqadiisu waxay ku socotaa si aad u badan noloshayda in dhaqaalahaygu kor u kaco oo xaaladaha ka sarreeya iyo duruufaha ayaa bilaabi doona inay noloshayda ka muuqdaan magaca Ciise
Salaada ka dhanka ah masayrka iyo masayrka
Toban shey oo laga tukado 2021